What is jQuery framework (programming)? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » What is jQuery framework (programming)?
What is jQuery framework (programming)?
Posted by Myanmar Web Designer on Mar 28, 2013 in Computers & Technology |2comments
– From valide ဆိုတာ မသိလို့ စမ်းကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Myanmar Web Designer Contact Form စာမျက်နှာကို သွားပါ။ ကွက်လပ်တွေထဲမှာ ဘာမှမဖြည့်ပဲ Send ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ အဲဒီမှာ လိုအပ်တဲ့နေရာတွေ ဖြည့်ဖို့ ကျန်နေသေးကြောင်း alter box (သတိပေး box) လေး တက်လာပါမယ်။ အဲလို စစ်ဆေးတာကို form validate လုပ်တာလို့ ခေါ်ပါတယ်။
– Slider ဆိုတာ မသိရင်တော့ Singapore SEO Service ကို သွားကြည့်ပါ။ အဲဒီမှာ ပုံတွေ တစ်ပုံပြီးတစ်ပုံ မှိန်ပြီးပျောက်သွားလိုက် ပြန်ပေါ်လာလိုက် ဖြစ်နေတာ image slider ပါပဲ၊ Myanmar Web Designer Home Page မှာလည်း ကြည့်လို့ရပါတယ်။ သူကတော့ တစ်ပုံပြီးတစ်ပုံ ဘေးဘက်ကို ဝင်ဝင်သွားတာ တွေ့ရမှာပါ၊ slider တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုတော့ effect ချင်းမတူပါဘူး။
Advantages using jQuery
jQuery ကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်
– coding ရေးရတဲ့အချိန် လျော့နည်း သက်သာစေခြင်း
– jQuery ရဲ့ “Write less, do more” ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်အတိုင်း နည်းနည်းရေးပြီး များများဖန်တီးနိုင်ခြင်း
Where can I get jQuery?
jQuery ကို အခမဲ့ ရယူနိုင်ပါတယ်။ www.jquery.com ကိုသွားပြီးတော့ download jQuery ကို နှိပ်ပါ။
နောက်တစ်မျက်နှာ ရောက်သွားပါမယ်။ အဲဒီမှာ version (ပုံစံ) နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ တစ်ခုက compress(production) version ပါ၊ ကျွန်တော်တို့ download လုပ်ရမယ့် version ပါ။ နောက်တစ်ခုကတော့ uncompress(development) version ပါ၊
– uncompress (development) version ဆိုတာကတော့ ကိုယ်တိုင်ရေးတတ်ရင် သူတို့ရဲ့ jQuery ကို ပြင်ရေးလို့ရအောင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေးထားတဲ့ version ပါ။ ကိုယ်တိုင် develop လုပ်လို့ရတဲ့အတွက် development version လို့ခေါ်တာပါ။
ဒါဆို compress (production) version ကိုတော့ အလိုလိုနားလည်သွားလောက်ပါပြီ။ ပြင်လို့မရတဲ့ version၊ jQuery နဲ့ product တွေ ရေးဖို့ကောင်းတဲ့ version မို့လို့ production version လို့ခေါ်ပါတယ်။ compress လုပ် (ချုံ့) ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် development version ထက် file size သေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖွင့်ကြည့်ရင်တော့ ဘာတွေမှန်းသိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ compress version က ကုဒ်တွေကိုတော့ နဂိုရေးထားတဲ့လူတွေလည်း နားလည်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ browser ကပဲ နားလည်နိုင်ပါတယ်။
Myanmar Web Designer Blog မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
entry-level တွေ ဖတ်လို့ နားလည်အောင် ..client-server logic ကို နည်းနည်း ၀င် အားဖြည့်ပါရဇီဗျာ…
ကျုပ်လက်ခံထားတဲ့ မော်ဒယ်တခု ..အတွေးတခု ရှိသဗျ…
ကျနော်တို့ ဆန်ကုန်နေတယ် . .ဆန်သွားဝယ်မယ်ပေါ့ …
ဆန်ဆိုင်သွား တပြည်တန်သည် နှစ်ပြည်တန်သည် ၀ယ်တယ်ပေါ့လေ…။
ဆန်ဝယ်ပြီး ပြန်အလာ .. ရလာတဲ့ ဆန်ကို အိမ်က .. အိုးဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်
ခွက် ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ် တောင်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်.. အဲ့သည့်ထဲ ထည့် သိုမှီးတယ်ပေါ့…။
ပြောချင်တာဆန်သွားဝယ်တဲ့အခါ ဆန်ကို ကျွတ်ကျွတ်အိတ်နဲ့ဖြစ်စေ သယ်လာမယ်ပြီးမှ
အိမ်က တောင်းတွေ ခွက်တွေထဲ ထည့်မယ်.. ။ အဲ ..ဆန်ဝယ်သွားရင်တော့
အိမ်က တောင်းတွေ ခွက်တွေ ဆိုင်ထိ ယူမသွားဘူးပဲ …။
Java Script က ဒီသဘောပဲ..။
Client-Server သဘောတရားမှာ … အလုပ်တခုအတွက် Program ၁ပုဒ်ပဲ ဖြစ်စေ
၂ပိုင်းခွဲရေးရသလို သဘောရှိတယ်.. Client ဘက်မှာ အလုပ်လုပ်မယ့် script နဲ့
Server ဘက်မှာ အလုပ်လုပ်မယ့် Script ဆိုပါတော့..
Java Script က အထက်က ဥပမာနဲ့ ပြောရရင် အိမ်မှာထားတဲ့
ဆန်ထည့်မယ့် အိုးတွေ ခွက်တွေနဲ့ တူလေရဲ့ … Server side (ဆန်ဆိုင်)ကနေလာမယ့်
ဟာတွေကို အသင့်ခံယူ သိုမှီး စီမံမယ့် အရာတွေ ဆိုပါတော့.. သူဟာ Server side (ဆန်ဆိုင်)
ကိုမသွားဘဲ Local မှာ အလုပ်လုပ်မယ့် ပုံစံ ရှိတယ် ပြောရမပေါ့..။
Java Script ရဲ့ Validate ပိုင်းကတော့ တခုရှိသဗျ… ၁၀၀% လွှမ်းခြုံနိုင်မယ် မဆိုလိုနိုင်ဘူး..။
ဖြည့်သင့်လျက် မဖြည့်ထားတဲ့ field .. ဒါမှမဟုတ် format မမှန်မကန်ဖြည့်ထားတဲ့ field
မျိုးကို စစ်နိုင်ပေမယ့် .. New Nick Name Register လိုမျိုး P/W တိုက်စစ်တာလိုမျိုးကတော့..
ဆာဗာဆိုက်ဒ်သွားကိုသွားရမယ့် Coding မျိုး ရေးရမှာ လို့ ဆိုချင်ပါတယ်…။
အချက်အလက်ပိုင်း အားဖြည့်မိတာ ခံစားနားလည်နိုင်မယ်ယူဆရင်း ကိုယ့်ဆြာကို ပြောခဲ့ချင်တာကတော့
ရွာထဲမှာ ဒီလိုစာမျိုး ရေးသားမယ့် လူရှိနေတာ ၀မ်းသာဂုဏ်ယူမိကြောင်း ပါဗျာ..။
ဒါမျိုးတွေ များများ ရေးပါဦး….လို့လည်း တောင်းဆိုပရဇီ..
အပေါ်က ရေးသွားတဲ့ comment ကို မလိုက်နိုင်တဲ့လူတွေအတွက်ပါ။
server side script သို့မဟုတ် server script ဆိုတာကတော့ ဆာဗာပေါ်မှာ ပဲ run နိုင်တဲ့ code ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ PHP, C#, AJAX, …